Soo dejisan KakaoTalk 5.3.3 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: KakaoTalk
KakaoTalk – software caan ah isgaarsiinta sahlan la isticmaala oo dunida ah. Software ayaa u saamaxaaya in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah, ka dhigi cod ama video calls iyo wadaagaan faylasha. KakaoTalk kuu ogolaanayaa inaad wargelisaa saaxiibo ah oo ku saabsan meesha aad hada degan iyo u saamaxaaya in ay wada xiriiraan chat group, codka ama video shirarka a. Sidoo kale KakaoTalk ka kooban badan oo smileys kala duwan oo ka dhisay jadwaliye ku xusuusinaya.
Voice iyo video calls
Isgaarsiinta ee CHAT kooxda iyo shirar
Set badan oo smileys
Soo dejisan KakaoTalk
Faallo ku saabsan KakaoTalk
KakaoTalk Xirfadaha la xiriira
BBM – waa farriin caan ah si uu ula xiriiro asxaabta aaladda BlackBerry, Android iyo iPhone. Softiweerku wuxuu taageeraa waxyaabo badan oo waxtar leh xagga farriinta fudud.